Mey 22, 2018 Admin
Arzantina banky no lasa voalohany nampiasa Bitcoin ho an'ny mpanjifa varotra
Ankehitriny Arzantina Banco Masventas, amin'ny fiaraha-miasa fifanakalozana Bitex, tonga ny voalohany hampiasa Bitcoin banky ho an'ny tena mpanjifa varotra, manokana ho vola miampita sisintany.
Toa ho ny banky an-toerana voalohany eto amin'izao tontolo izao mba hamela mpanjifa hampiasa Bitcoin toy ny fandoavam-bola safidy. Araka ny banky, dia afaka mampiasa ny mpanjifa izao Bitex mba handefa vola Mihoatra ny 50 firenena samy hafa Tsy ampy 24 ora, amin'ny sarany ny 3% +VAT.
Polonina fanapahan-kevitra mampiato ny fanoratana cryptocurrency varotra
Ny Ministeran'ny Fitantanam-bola ho an'ny Polonina dia namoaka fanambarana vaovao momba ny hetra amin'ny firenena lalàna.
Maro ny faly ny cryptocurrency Polonina mpampiasa, ny hetra amin'ny varotra cryptocurrency no nanainga vonjimaika toy ny manam-pahefana no nahatsapa ny fomba inapplicable sy tsy mahay mandinika ny lalàna hetra ireo.